Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ)
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
ovarian cancer ဆိုတာ မ မျိုးဥ နှင့် ဟော်မုန်း estrogen နှင့် progestogen ထုတ်ပေးတဲ့ အင်္ဂါတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းမှာကြိုသိရတဲ့ မျိုးဥကင်ဆာရောဂါကိုတော့ ကုသရလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်လဲ အစောပိုင်းအခြေအနေမှာ ရောဂါကိုတွေ့ရဖိုက ခဲယဉ်းပါတယ်။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
မမျိုးဥကင်ဆာက အမျိုးသမီး သက်လတ်ပိုင်းတွေနဲ့ သက်ကြီးပိုင်းတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ အများဆုံး သေစေနိုင်တဲ့ မမျိုးဥကင်ဆာတွေကို အသက် ၅၅ နှစ်ကျော်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ တွေ့ ရနိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ovarian cancer ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက အထူးသဖြင့် အစောပိုင်းမှာ မထင်ရှားပါဘူး။ လူနာအများစု နှင့် ဆရာဝန်တွေတောင်မှ တခြားရောဂါတွေရဲ့လက္ခဏာတွေနဲ့ မှားတတ်ပါတယ်။ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
အစာအိမ် လေပွခြင်း၊ ရင်ပြည့်ခြင်း
အစားစာလျှင် ဗိုက်ပြည့် မြန်ခြင်း
တင်ပါးစုံနေရာမှာ သက်တောင့်သက်သာ မရှိသလို ခံစားရခြင်း
ပျို့ခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်း၊ လေတက်ခြင်း
ရာသီလာစဉ် မိန်းမကိုယ်မှာ သွေးထွက်နေခြင်း
သင့်ဆီမှာ အထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခု ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ယနေ့ထိတိုင် ဆရာဝန်တွေ အဖြေရှာ ရခက်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ခန္ဒါကိုယ်တွင်း မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲ ခြင်းတွေကြောင့် ပုံမှန်ဆဲလ်တွေကနေ ကင်ဆာဆဲလ်တွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပြီး ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ထို့နောက် ပွားများလာကြကာ ကင်ဆာကြိတ်ဖြစ်လာကြပါတယ်။ ထို့ပြင် ဒီကင်ဆာဆဲလ်တွေက အနီးနားက ဆဲလ်တွေကို တိုက်ခိုက်ပြီး တခြားအင်္ဂါတွေကို ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ovarian cancer ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
ကလေးအယူနည်းခြင်း။ ကလေးယူတာနည်းလေ မျိုးဥ ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သို့ မိသားစု ဆွေမျိုးထဲမှာ ရင်သားကင်ဆာဖြစ်ဖူးလျှင် ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
Estrogen ၅ နှစ်နှင့် အထက် သွင်းနေရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါလက္ခဏာ နှင့် စမ်းသပ်မှုတွေကို အခြေခံပြီး ဆရာဝန်တွေက ရောဂါကို အဖြေရှာ အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။ အက်ထရာဆောင်း၊ သံလိုက်ဓါတ်မှန်၊ ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွေ ဖြင့်လည်း ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Biopsy က မျိုးဥ ကင်ဆာဟာ ပြန့်နှံ့နိုင်တဲ့ အမျိုးအစား ဟုတ်မဟုတ်ကို သိနိုင်တဲ့ တစ်ခုထဲသောနည်းဖြစ်ပါတယ်။ biopsy ဆိုတာ တစ်ရှူး အသားစ ယူပြီး အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်မှာ ကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်တွေက ကင်ဆာရဲ့ အဆင့်(ကင်ဆာ ဘယ်လောက်ပြန့်နှံ့နေပြီလဲ) ကို သိနိုင်ရန် ခွဲစိပ်ခြင်းတွေလဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တခါတရံ ကင်ဆာ antigen ( CA-125 ၊ သွေးထဲမှ အရာတစ်ခု) ကလည်း ရောဂါရှာရာမှာ အထောက်အကူပေး နိုင်ပါတယ်။
Ovarian Cancer (မမျိုးဥအိမ်ကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကင်ဆာအဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ခွဲစိပ်ကုသခြင်းက အသုံးများဆုံးသော ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာရဲ့ အစပိုင်းအဆင့်တွေအတွက် မမျိုးဥအင်္ဂါနဲ့ ပြွန်တို့အား ခွဲစိပ်ဖယ်ရှားခြင်းက တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ကင်ဆာက တင်ပါးစုံ နှင့် အစာအိမ်တွေထဲ ပြန့်နှံ့လာလျှင် ၎င်းအင်္ဂါတွေနဲ့ သားအိမ်ကိုပါ ဖယ်ရှားရနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင် ကင်ဆာဆဲလ်တွေ ကျန်ရှိနေသေးလျှင် ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းများလဲ လုပ်ရနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ဆရာဝန်က လူနာကို အခြေအနေ သိနိုင်ရန် ရက်ချိန်း ပုံမှန် ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ovarian cancer ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လို အထောက်အကူပြု နိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ovarian cancer ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ဆရာဝန်ရက်ချိန်းများကို မှန်မှန် သွားပြခြင်းဖြင့် သင့်ရောဂါအခြေအနေ နဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိနိုင်ပါတယ်။
• ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ကို လိုက်နာပြီး ဆေးများကို အသုံးပြုပါ။ ဆရာဝန် မမှာပဲ မိမိ သဘောဖြင့် ဆေးသောက်ချိန်ကျော်ခြင်းများ မပြုလုပ်ရပါ။
• ဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ခံစားနေရလျှင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
• ဟင်းသီးဟင်းရွက်၊ သစ်စေ့များ နှင့် အဆီလျှော့စားခြင်းဖြင့် ကျန်းမာတဲ့စားသောက်မှုပုံစံကို ပြုမူပါ။
• ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းခြင်း နှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပါ။
Porter, Robert. Kaplan Justin. Homeier Barbara.The Merck manual home health handbook. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2009. Print edition. Page 1573